Global ESP Emailvision inotenga Social Media Platform Chinangwa Marketer
Chishanu, January 14, 2011 China, June 9, 2016 Douglas Karr
Takave nemufaro wekusangana nekushanda nevatungamiriri mumakambani maviri aya gore rakapera. Emailview uye Chinangwa Marketer. Ini ndakamhan'arira paEmailvision pakutanga kwegore nekuti ndakafadzwa neyavo kudyidzana kwenyika kuedza. Kushanda kwavo hakusi kwepasirese chete, ndizvo zvakaitawo nguva dzenzvimbo… nzira yese kusvika kune anonyorera!
Iyo kambani iri kusangana pamusoro pe40% kukura gore pamusoro pegore uye nekukurumidza ichikura kuita misika muSouth America neAsia, mushure memugove wakakura wemusika watove muEurope. With hispanic email kushambadzira pakukwira muUnited States, Emailvision yakagadzirirwa zvakanaka kupa ESPs muno muUnited States kumhanyisa mari yavo. Kwete chete ivo vanotsigira mizhinji mitauro yemuno kuburikidza nehukama hwavo, ivo vanovatsigirawo neakaunti yavo manejimendi uye vashandi vevashandi!
Isu takave zvakare nemukana wekuona yakazara ratidziro ye Chinangwa Marketer zvakananga kubva kumuvambi Amita Paul. Amita tarenda rinoshamisa - uye anonzwisisa mashandisiro evashambadzi data uye zvavanoda kuteedzera nazvo. Chinangwa Marketer chishandiso chinoshandiswa nemakambani kuratidzira ese avo enhau enhau hurukuro uye kuteedzera traffic yakanangana nekudzokera kumasiti avo. Chishandiso chepasirese chine kusangana pamwe neTwitter, Facebook, Ping.fm… nemukana weku bairira chero chinzvimbo chemagariro chinotevera chinotevera. Izvo zvakare zvinobatsira kuti Guy Kawasaki inhengo yebhodhi!
Tichangobva kudzidza izvo (achangodzokororwa) Emailviewvision yakatengwa Chinangwa Marketer! Zvichava zvinonakidza kuona izvo kudyidzana pakati peaya matekinoroji akachengetera kukona!
Makorokoto kumasangano ese ari maviri. Nick Heys nechikwata chake muClichy, France, vamwe vanhu vanoshamisa uye kambani yavo iri kuramba ichipisa nzira munzvimbo ino pasi rese. Kubatanidza tarenda iri nemaonero aAmita kunonakidza zvechokwadi! Kana zvikaitwa nemazvo, ndine chokwadi chekuti Emailvision inogona kunge iri mupi wepasi rose weemail service mukati memakore mashoma.
Tags: eemailNick heyschinangwa mushambadzievanhu vezvenhaumagariro enhau
Zvekushandisa neAggregation uye Syndication